Iimveliso ezikhuselayo ngokuqhuma
Ngapha koko zikhusele ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo ...
Ezi mveliso azithengiswa kuphela kwizixeko ezikhulu eTshayina, kodwa ...
Ukulinganisa i-thermometer ligama ngokubanzi lezixhobo zokulinganisa ubushushu. Ukulinganisa i-thermometer inokugweba ngokuchanekileyo kunye nokulinganisa ubushushu. Isiseko yoyilo lweMilinganiselo yovavanyo yokulinganisa kukusebenzisa izinto ezifana nesolids, ulwelo, kunye neegesi ezikhulayo kunye nekhontrakthi ngenxa yobushushu. Ukulinganisa i-thermometer ine-thermometer yeparafini, ithemomitha yotywala, ithemomitha yokukhanya, ukunyuka kwegesi yokukhanya, ithemomitha yokukhanya kunye nefmometric thermometer, ithemimitha ebushushu kunye nolunye uhlobo lwetrmometers ngokhetho lwethu, kodwa kufuneka siqwalasele ubushushu ngokuchanekileyo kunye nokuqonda ubushushu obuchanekileyo kunye nokuqonda okufanelekileyo . Iimpawu ezinxulumene ne-Thermometer yoLinganiso yenza kube lula ukusetyenziswa kwayo.
Umatshini wemaski yobuso luhlobo lweemaski zokwenza umsebenzi othile wokucoca okwenziwe ngamalaphu amaninzi angalukwanga ngokucinezela kushushu, ukusongela ukubumba, i-welding ye-ultrasonic, isuswe isikhuhla, ukubetheka nge-Earband impumlo yebhulorho yentsimbi, njl njl.
Umatshini wemaski yobuso awungomatshini omnye. Ifuna ukusebenzisana koomatshini abaninzi ukugqiba iinkqubo ezahlukeneyo.
Ezona zixhobo zisetyenziswayo kwimaski zikho:
Iindidi zempahla ekhuselayo zibandakanya iimpahla zokukhusela umlilo, impahla ekhuselayo yasemizi-mveliso, iimpahla zokhuselo lwezonyango, iimpahla ezikhuselayo emkhosini kunye neengubo ezikhuselayo zabantu abakhethekileyo.
Isinxibo esikhuselayo sinemvume elungileyo yokufuma kunye neepropathi zesithintelo, kwaye sinokumelana ngempumelelo notywala, igazi, ulwelo lomzimba, amasuntswana othuli lwomoya Intsholongwane yokungena, ekhuselekileyo nelungele ukusetyenziswa, inokumkhusela ngokufanelekileyo lowo uyinxibileyo kwisisongelo losulelo, ukunxiba ngokukhululeka, ukuziva kakuhle, Amandla obukhali obunamandla, ukuphefumla nokunqaba kwamanzi, akukho lusulelo lomnqamlezo, njl.
Nikeza ngezifo zokuthintela ubhubhane kwihlabathi, liphantsi kunokuhanjiswa yintsholongwane! Ngokukodwa bonelela ngeglasi, iigloves zerabha, Impahla ekhuselayo, ithemometha, isibulala-ntsholongwane, isicoci sesandla, oomatshini bemaski, iindlebe zemaski, iimelblown cotton swabs, ii-cotton swabs, iiarhente zokubona kunye nokunye ukuhambisa okuchasene nobhubhane! Yenziwe eTshayina ukubonelela ngeemveliso zokulwa ubhubhane kwihlabathi ukulwa ubhubhane!
IQuanz waimaoniu yokuNgenisa kunye nokuThunyelwa kweMpahla kumazwe angaphandle yasekwa ngo-2017.06.02, yinkampani ebanzi edibanisa uyilo, imveliso kunye nentengiso. Ngapha koko nikezela ngemaski ekhuselekileyo nenokuthenjwa yokukhuseleka, iimasks ze-KN95, iimaski zonyango, iimaski zabantwana, imaski yabantu abadala, imaski yaseburhulumenteni, iiglass, iigloves zerabha, iimpahla ezikhuselayo, ithempletha, isibulala-ntsholongwane, isepha yesandla, umatshini wemaski, iindlebe zemaski, ilaphu leMeltblown , ii-swabs zekotoni, iibhola zomqhaphu kunye nezinye izinto zokhuselo. Ezi mveliso azithengiswa kuphela kwizixeko ezikhulu eTshayina, kodwa zithunyelwa nakwiYurophu nakwiMpuma Yurophu, kwi-Southeast Asia, kuMbindi Mpuma .......